Fampidinana Maimaim-Poana amin'ny Adobe Audition amin'ny 2 Click
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Audition Maimaim-Poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-06-20, Malagasy Blog
Lisansa: Kinova fitsapana
Rehefa maheno maimaimpoana ny Adobe Audition ianao dia mety hieritreritra momba ny loharano torrent, sa tsy izany? Ahoana raha nolazaiko taminao ny fomba iray ara-dalàna hahazoana ny kinova farany an'ny rindrambaiko mpamokatra feo sy mozika amin'ny tsindry 2?
Tombontsoa ho an'ny Adobe Audition maimaimpoana:
Fampidirana henjana amin'ireo fampiharana Adobe hafa
Manohana ny fanovana batch
Azonao atao ny mampiditra plug-in hanatsarana ny lalan'ny feo
Vokatry ny feo ara-javakanto maro
Raha mbola manana fanontaniana ianao dia vakio azafady ireo FAQs ireo. Azoko antoka fa hahita valiny amin'ny ankamaroan'izy ireo ianao.
Afaka mampiasa ny Fitsarana Maimaim-poana mihoatra ny indray mandeha ve aho?
Tsia, ny fitsapana maimaimpoana dia tsy misy afa-tsy indray mandeha isaky ny fampiharana ao amin'ny Creative Cloud.
Afaka mahazo fihenam-bidy amin'ny famandrihako ve aho?
Eny, malala-tanana amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra i Adobe ary manome azy ireo fihenam-bidy hatramin'ny 60% amin'ny drafitra voafantina. Ankoatr'izay dia tokony hitsidika ny tranokala Adobe ofisialy mandritra ny fialantsasatra ianao mba tsy hahadiso anao ny fihenam-bidy mahafinaritra avy amin'ny mpamorona.
Ahoana raha nametraka ilay rindrambaiko aho nefa tsy mandeha amin'ny PC-ko?
Azo inoana fa tsy mahafeno ny fepetra takiana farany amin'ny rafitrao ny PC-nao, aza adino ny mijery azy ireo. Izy io koa dia azo ampifandraisina amin'ny malware (virus) izay anananao amin'ny PC-nao.
Na ahoana na ahoana, tokony hanatona ny fanampiana ianao ary hifampidinika amin'izy ireo satria mety hitaky fomba hafa ny tranga tsirairay.
JEREO NY FITIAVANA SYSTEMA ADOBE AUDITION
Maninona aho no tsy afaka mampiasa Adobe Audition Free Download miaraka amin'ny triatra?
Isika tsirairay avy, angamba, nanontany ny tenany toy izao, satria hamonjy anao rehetra izany. Mino aho fa $ 10 isam-bolana ho an'ity rindrambaiko matihanina ity dia be dia be, na dia maro aza ny olona tsy hanaiky izany ary mahita fa tsy ekena izany.
$ 10 isam-bolana sa sazy $ 1.000?
Taona maro lasa izay, Verizon, AT & amp; T, Cablevision, Comcast ary Time Warner dia nanangana rafitra iray hiadiana amin'ny fitsinjarana ara-dalàna ny asa zon'ny mpamorona. Ny antony ao ambadik'izany dia ny fomba nanjary nalaza tamin'ny fampiasana rindrambaiko tsy ara-dalàna.
Manontany tena ianao hoe inona no tafiditra ao? Ny zavatra voalohany ho hitanao dia fampitandremana ao anaty boaty. Raha toa ka manohy mampiasa loharano torrent ianao dia hampifandray anao ny mpamatsy anao ary farany, hiantso anao any amin'ny tribonaly.
Hainao ve fa? Tsy misy olona hanome anao fampitandremana any amin'ny fitsarana, tsy maintsy mandoa onitra 1 000 $ ianao. Ankehitriny, mieritrereta indray, iza no tsara kokoa, $ 60 sa $ 1.000?
Makà traikefa an-tanana amin'ireo viriosy
Ka noho izany dia nampidina ny Adobe Audition maimaim-poana avy amin'ny torrent tracker ianao. Ankehitriny dia mila miandry amin'ny alàlan'ny doka ianao, hanombohana na hanao zavatra ilay app, ary avy eo misy hafatra mipoitra fa tsy nety nampiditra ny rafitrao.
Izany rehetra izany dia vokatry ny viriosy natsangan'ireo mpijirika amin'ny rindrambaiko "maimaim-poana". Betsaka amintsika no tsy maintsy niatrika viriosy tamin'ny fotoana rehetra teo amin'ny fiainantsika, ary fantatray fa ny mpanamboatra solosaina tsara dia handoa anao mihoatra ny famandrihana isam-bolana.
Hadinoy ny fanavaozana
Raha efa nampiasa rindrambaiko tsy ara-dalàna ianao dia mety fantatrao fa ny kopia piraty dia tsy mitovy amin'ny an'ny lalàna, satria ity farany dia tsy azo havaozina. Ho tapaka mandrakizay ny kinovanao ary tsy hisy fampidinana alaina.
UPDATE ADOBE AUDITION VERSION MAIMAIMPOANA
Tsy misy mpanohana anao
Alao an-tsaina izao toe-javatra izao: tsy hanomboka ny Adobe Audition maimaimpoanao, na, angamba, nanjavona ireo fitaovana ampiasainao matetika, nijanona ny famaliana ilay fampiharana ary tsy azo ampiasaina intsony.
Raha mampiasa rindrambaiko ara-dalàna ianao dia afaka mifandray amin'ny fanohanana ara-teknika, miresaka amin'ireo mpitantana misy ary fantaro ny anton'ilay tsy fetezana ao anatin'ny minitra vitsy.
Raha mampiasa kinova tsy ara-dalàna ianao dia holavina ny fanampiana anao.
Ny kofehy sy ny kodiarana no namanao akaiky indrindra
Mety hahagaga anao izany, fa ny mpijirika dia manova be ny kaody loharano an'ny rindrambaiko alohan'ny hampidirana azy amin'ny riandrano.
Manova fanaraha-maso fanovana vitsivitsy izy ireo ary mety hanimba ny filaharana mihitsy aza. Alao an-tsaina fotsiny hoe nisy nanala visy roa teo amin'ny sezanao, ka amin'ny manaraka hipetrahana eo amboninao ianao dia hianjera tokoa ianao ary ho vaky ny sezanao.
5 Hafa Adobe Audition Alternatives
Raha sendra nifaneraserana tamina rindrambaiko rindrambaiko ho an'ny famoronana feo sy mozika ianao, dia fantatrao tsara fa sarotra be izany. Mba hanavotana anao amin'ny filàna fampiharana hafa am-polony maro dia efa nifidy top 5 safidy tsara indrindra ho an'ny Adobe Audition aho.
Safidy fanovana feo maro
Tonga lafatra ho an'ny fifanakalozan-kevitra, ny vokatry ny feo ary ny fanapahana ny lalan'ny mozika
Manohana firaketana multitrack
Endri-javatra voafetra napetraka raha oharina amin'ny Audition
Tsy manohana fanovana tsy manimba
Raha te-hanomboka podcast na handefa mozika ianao, na mila fitaovana tsotra fotsiny handrafetana sy hamadihana santionana feo, dia ho safidy mety aminao izany Audacity.
Izy io dia tonian-dahatsoratra maimaim-poana maimaim-poana miaraka amin'ny loharano misokatra, izay azon'ny rehetra ampiasaina maimaim-poana. Ny Audacity dia miasa tsara miaraka amin'ny feo hatramin'ny 32 bit / 384 kHz miaraka amin'ny fanoherana manohitra aliasing.
Mora ny manafatra, mampifangaro ary manambatra ireo rakipeo feo (stereo, mono na koa firaketana multitrack), ary koa milalao ny vokatra ho rakipeo tokana.
Ity safidy Adobe Audition maimaim-poana ity dia manome fanitsiana malefaka hatrany amin'ny haavon'ny fisafidianana, ary koa spectrograms sy fomba fijery spectral hahafahanao mamakafaka matetika.
AV AUDIO EDITOR MAIMAIMPOANA
Maimaimpoana tsy misy fetra na mari-drano
Fiolahana mianatra mideza
Ny fitaovana sasany dia mila fanadiovana
Izy io dia manana interface tsotra miaraka amina takelaka fitaovana eo an-tampony izay ahafahana mamantatra tsara ny tsirairay amin'izy ireo.
Ny andiana fitaovana dia fitambarana fitaovana fanovàna feo, effets ary preset.
Iray amin'ireo mampiavaka indrindra ity fampiharana fanovana am-peo ity ny kiheba "Mix".
Manokatra varavarankely ho an'ny fandaminana mozika izy io ary ahafahanao manova sy mifangaro dian-peo marobe amin'ny fotoana iray.
Tena hanampy tokoa amin'ny fanitsiana podcast misy loharano feo roa na maromaro. Amin'ity tabilao ity dia azonao zaraina amin'ny lalana misaraka ny feony, fehezo ny volanao sy ny fanamafisana, ataovy ara-dalàna ny feo.
Tsy misy fitaovana na tadivavarana tafiditra
Reaper dia mamela ny fandraisam-peo amin'ny fotoana tena izy, manome anao fitaovana virtoaly sy console fampifangaroana feno, fanitsiana fanamarihana tena izy ary mamela anao hanao feo.
Tsy toy ny DAW mifaninana maro hafa, azonao atao ny mampiasa azy io hamoronana menus, takelaka, fitaovana ary makrô anao manokana. Azonao atao koa ny manova ny loha-loko sy ny loko amin'ny interface.
Na izany aza, mila tadidinao fa ny Reaper dia fampiharana sarotra, izay mitaky fotoana hianarana, ka mety tsy dia mety amin'ny vao manomboka.
Mamorona sy mitendry zavamaneno virtoaly midi
Tsy misy fitendry Midi virtoaly
Tsy manana firaketana an-tsoratra
Raha misy zavatra tianao kokoa amin'ny loharano misokatra, saingy mila mihoatra ny zavatra atolotry Audacity ianao dia tena mamporisika anao aho ny manandrana an'i Ardor.
Toeram-piasana miasa tanteraka miaraka amina endri-javatra ilaina maro hanamboarana sy fanovana. Handany vola $ 0 ianao ary miaraka amin'ny loharano misokatra tanteraka.
Ny fampiharana dia afaka manamboatra plugins misy be dia be toy ny VST, Ladspa ary lv2. Tiako ihany koa ny fahafahanao mifandray amin'ny jack-server, ny mpanara-maso OSC ary ny midi hahafahana mifandrindra amin'ireo fampiharana sy fitaovana hafa
Hamafana ny interface
Spectrogramme sy fandalinana rakitra mahasoa
Tsy manohana ny fametahana ny vokany
Ity tonian-dahatsoratra audio maimaimpoana ity dia manana fitaovana hifehezana azy ary ahafahanao manodina rakitra marobe marobe amin'ny fotoana iray, tsy misy mpampiasa vaovao be loatra.
Ocenaudio dia tonga miaraka amina safidy sivana tafiditra ary manohana ny plugins VST, amin'izay ianao afaka manampy bebe kokoa. Na izany aza tsy tiako ny zava-misy fa tsy loharano misokatra velively.
Tsy toy ny Audacity, tsy ho afaka hanova ny kaody ao aminy ianao, raha tsy mahafeno ny fepetra takinao manokana.
Sintomy ny Adobe Audition Free
Sintomy ny Audition maimaim-poana amin'ny Mac / Win
Sintomy ny Adobe Audition ary andramo alohan'ny hisoratra anarana mandritra ny 7 andro. Azoko antoka fa ho afa-po ianao amin'ny fampifandraisana azy sy ireo endri-javatra tsy hita ao amin'ny horonan-tsary mora sy fitaovana napetraka.
Tombontsoa ho an'ny Adobe Audition
Sintomy maimaim-poana ny audition